1. Intyatyambo yakho kwasekuqaleni ngaphandle kwelungelo lokuloba.
Uyiqala njani ivenkile yakho yeentyatyambo ukusuka ekuqaleni kwaye ngaphandle kwefranchise. (Incwadi ka-A.A. Elcheninov)
Umbono wokuvula ivenkile yakhe yeentyatyambo uye watyelelwa ngumntu onomdla wefloristry kudala wakhula waba ngumsebenzi wobuchule ngenxa yothando olulula lweentyatyambo. Yiloo nto endandihlala ndiphupha ngayo.
Emuva kwi-90s, ndaye ndagqiba kwelokuba ndiqale ishishini leentyatyambo ndaza ndavula indawo yam yokuqala yokuthengisa iintyatyambo. Umbono uyimpumelelo, kwaye kamva wakwazi ukuphinda impumelelo kwivenkile eseMelika. Kungekudala, ndandineendawo ezininzi ezenza ingeniso elungileyo. Ndicinga ukuba amava am okuqhuba ishishini elincinci eliyimpumelelo liya kuba luncedo kwabaninzi. Kule bhlog ye-intanethi, ndiza kutyhila iimfihlo ezimbalwa zendlela yokuqalisa ivenkile yakho encinci ezisa uyolo kwimisebenzi oyithandayo kunye nembuyekezo yemali yomsebenzi wakho.
Ndiyilawule njani? Okokuqala, bekukho umnqweno omkhulu kunye nenkolelo kumandla akho. Okwesibini, ndiyayithanda into endiyenzayo. Okwesithathu, umnqweno wokwenza amalungiselelo eentyatyambo ezihlekisayo ukuhanjiswa kwee-bouquets kunye nokuthengisa ngaphakathi kweendonga zevenkile, umnqweno wokuqonda izimvo zabo zoyilo kunye nokwabelana ngazo nabanye. Ukuzingisa kwam ekoyiseni ubunzima, ukunxanelwa ukufumana le nto ndiyifunayo, kwandinceda ndaphumelela. Ndikhawulezile ukwabelana nani ngamava okuhamba ukusuka ephupheni ukuya ekuvuleni ishishini lakho leentyatyambo.
Njengayo nayiphi na enye into oyithandayo, uthando lweentyatyambo lufuna utyalomali lwemali kwaye luthatha ixesha elide. Ngokuthe ngcembe, iba ngumkhwa, imisebenzi yemihla ngemihla iba yinto yesiqhelo, imvakalelo yokutsha ilahlekile. Le nkqubo ayinakuphepheka, ihlala ifikelela kuphela kwimeko leyo. Kodwa incoko ayisiyiyo loo nto.
Ngokuthe ngcembe, umdla olula kwi-floristry ujika ube ngumnqweno wokwenene, othabathekisayo, owokucenga kunye nokufunxa ngokupheleleyo nangaphandle komkhondo. Amalungu osapho awahlali kude nale nkqubo. Umlingo weentyatyambo unomdla kuye wonke umntu obandakanyekayo ngandlela thile kwinkqubo. Ukubandakanyeka akunakuthintelwa kwaye kungekudala onke amalungu osapho azama ukusebenza kunye ukwenza into efanayo.
Kuya kufuneka ulungele ukutshintsha indlela ophila ngayo. Nabani na ogqibe kwelokuba avule ishishini leentyatyambo sele enamava amancinci ahambelana nefloristry. Ngayiphi na imeko, umnqweno wokurhweba ngeentyatyambo awuveli ekuqaleni, nangona oku kunokwenzeka. Kodwa kwiimeko ezininzi oku ngaphandle komthetho. Ukongeza, amaxesha apho ukuthengisa okulula kwee-bouquets kuletha inzuzo enkulu kudala. Imarike yeentyatyambo yanamhlanje igcwele iimpahla ezahlukeneyo, kwaye yona ngokwayo ayisasebenzi kwaye inomdla ongacingekiyo. Abantu batsaleleka kwinkonzo ejolise kubathengi, indlela yomntu ngamnye. Onke la manqaku kufuneka athathelwe ingqalelo, kwaye ukuthengisa kucwangciswe kakuhle.
Kwiphepha elilandelayo -> 1.2. Intyatyambo yakho kwasekuqaleni ngaphandle kwelungelo lokuloba.
I-Eucalyptus - ii-25 iiPC.
Ranunculus (Ibhotolo) - ii-51 iiPC.
Ngama-32990 Корзина "Первая любовь"
Ngama-4720 Isipha senombolo 54
Peony yenyuka - 9 pc.
Ngama-4340 Букет из 9 пионовидных розы "Вувузела"
Ibhasikithi ye-chic ye-peony roses iya kukunceda ukubonisa iimvakalelo zakho kwaye iya kuba sisipho esihle.
Ngama-29188 Ibhasikithi "Umlingo weentyatyambo"
Ngama-6090 Яркий МИКС из 35 роз
Ngama-17250 Ibhasikithi enama-peonies "Peony Delight"
Isipha seeroses ezili-101 ezinobumba "A" - Yothusa intanda yakho nathi! Isipha seentyatyambo ezineleta sisipho esifanelekileyo esiza kukonwabela iintyatyambo zethu. Singenza naluphi na unobumba okanye inombolo.
Ngama-21340 Isipha seentyatyambo ezili-101 ezinonobumba "A"
Ngama-4590 Isipha senombolo 105